Gudoomiye Tarsan Oo Ku Sigtay In Laqaarijiyo, Yaase Ka Dambeeyay (warbixin)
January 2, 2013 | Posted by admin
Muqdisho -Hey’adaha ammaanka dowladda ayaa sheegay inay fashiliyeen qorshe la doonayay in lagu dilo Gudoomiyaha Gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, iyadoo ruux loo adeegsanayay inuu fuliyo uu ka tirsanaa shaqaalaha Maamulka Gobolka Banaadir.
Taliyaha Nabadsugida Gobolka Banaadir Khaliif Axmed Ereg ayaa sheegay in arrin fashilantay oo aan suura gelin ay noqotay inay isku dayaan in Gudoomiyaha Gobolka Banaadir dil loo geysto, isagoo xusay in miino ay u soo dhiibeen nin ay gacanta ku dhigeen.
“Dhacdadii u dambeysay ee kooxaha Al-Qaacida isku dayaan waxay aheyd inay dil u geystaan Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, waa arrin fashilantay, oo aan u suura gelin sidii loogu tala galay inay sameeyaan, waxaa ka hortagay hey’adaha amniga, miinada yarka loo soo dhiibay”ayuu yiri Khaliif Ereg oo wariyaasha la hadlay.
Sidoo kale ruuxa qorshahan la doonayay inuu fuliyo oo lagu magacaabo Tahliil C/llaahi ayaa sheegay in go’aankan ay isla soo gaareen Shabaab, isla markaana isaga loo adeegsanayay, markii xiriir lala soo sameeyay, isla markaana ay balan qaad u sameeyeen.
“Waxaa fashiliyay fal kooxaha nabad diidka ugu tala galeen Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, xiriir ayay ila soo sameeyeen balan qaadna waa ii sameeyeen inaan falka qaad oo miinada meelaha uu ku sugan yahay gudoomiyaha gobolka aan dhigo, sidaas lagu qarxiyo, waxaa suura geliyay xiriirkaas qof qaraabo ila ah oo xiriirka marka hore ila soo sameeyay”ayuu yiri Tahliil C/llaahi.
Mr Tahliil ayaa sidoo kale sheegay in uusan ugu tala gelin qorshaha sida ay u aameen inuu falkaas u fulo, hase ahaatee uu isaga u muujinayay kalsooni iyo inay falka fulintiisa ku aaminaan.
Isku daygan ayaa noqonaya kii u horeeyay ee qorshihiisa ahaa ee lagu maleego dilka gudoomiyaha gobolka Banaadir, iyadoo dhacdo tan ka horeysay ay aheyd markii horaantii sanadkan markii xiriir lala soo sameeyay nin darawal u ahaa Abaanduulaha Ciidamada xooga dalka Jen. Dhega-badan oo la doonayo inuu u fududeeyo ruux u diyaar ahaa inuu isku qarxiyo abaanduulaha, dabadeedna balan qaad loo sameeyay hadii falkaas uu suurta galo.
« Maxkamadda Addis-Ababa oo la soo taagay 10-ruux oo ku xiran ururka Al-shabaab
Taliska Ciidamada dowladda ee Hiiraan oo diyaariyay qorshihii Al Shabaab looga sifeyn lahaa Gobolkaasi »